भवनमा आगो लागेपछि ३ सन्तानलाई बचाउन बाबुले ५ तला माथिबाट तल फ्याके..(भिडियो)
एजेन्सी। श्रीलंकामा भएको एक भिषण आगलागीको भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ। स्थानीय भवनमा आगलागी हुँदा एक दम्पतिले आफ्ना सन्तान बचाउनको लागि गरेको हर्कत देखेर जो-कोहि पनि चकित पार्न सक्छ।
श्रीलंकाको क्यान्डी शहरमा भएको यस घटनाको भिडियोनै सामाजिक संजाल मार्फत बाहिरिएको हो। स्थानीय यतीनुवारा स्ट्रीटमा रहेको भवनमा आगलागी भएपछि बचाउन ती दम्पतिले आफ्ना सन्तानहरुलाई बचाउन पाच तलाको झ्यालबाट बाहिर फ्याकेका हुन्।
आगोबाट बच्ने अन्य बाटो नदेखेपछि दम्पतिले यस्तो तरिका अपनाएको बुझिएको छ। पाँच तलाको झ्यालबाट तीन बालबालिकालाई बाहिर फ्याकिएको थियो। पाँच तला माथिबाट खस्दा पनि तीनै बालबालिका बच्न भने सफल भए। सडकमा रहेका सर्वसाधारणहरुले समाएर सहयोग गरेको कारण यी बालबालिकाहरुको ज्यान बच्न सफल भएको हो।
आगलागीमा फसेका पिडित दम्पतिको पनि शकुसल उद्धार सम्भव भएको अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरु बताउँछन्। स्थानीय र उद्धारकर्मीहरुको सक्रियताना दम्पतिको उद्धार गरिएको हो।
आगलागीमा फसेकाहरुलाई उद्धार गरि अस्पताल पठाइएको स्थानीय मिडियाहरु बताउँछन्। आगोले असर गरेको हुंदा पिडित दम्पति पनि अस्पतालमा उपचारत छन्।
घटनास्थलमा रहेका एक व्यक्तिले भिडियो सामाजिक संजालमा अपलोड गरेसँगै भाइरल भएको हो। आफ्ना बच्चालाई बचाउन भन्दै ५ तला माथिबाट फ्याक्ने ती पिताको सामाजिक संजालमा प्रसंशा पनि भैरहेको छ।
Dramatic rescue in Kandy : Father throws his children from the 5th floor ofafire erupted building in Kandy City this morning. Both Children are safe, father & mother admitted to hospital with minor injuries according to Police pic.twitter.com/ugbXyOM0jH
— Azzam Ameen (@AzzamAmeen) January 8, 2019
शृंखला खतिवडाको यो तस्विर किन बन्यो यति धेरै आलोचित ? खास कारण यस्तो छ !